बच्चालाई शान्तिपूर्वक कसरी सम्झाउने ? - Sabal Post
बच्चालाई शान्तिपूर्वक कसरी सम्झाउने ?
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ० बिचार / प्रतिक्रिया
कहिलेकाहीँ बच्चाहरुलाई सम्झाउनु अभिभावकको लागि निकै कठिन विषय बन्नसक्छ । स्वभावैले जिद्दी हुने बालबालिकालाई सही तरिकाले सम्झाउन सकिएन भने बालबालिकाले पनि अभिभावकले भनेको मान्दैनन् । यसले बालबालिका र अभिभावक दुबैले नराम्रो महसुस गर्न पुग्छन्।
यद्यपि केही मनोवैज्ञानिक उपाय अपनाउने हो भने उनीहरुलाई शान्तिपूर्वक सम्झाउन सकिन्छ । उदाहरणको यदि कुनै बच्चालाई कुनै खानामा रोक लगाउने प्रयास गर्ने हो भने केही दिनमा उसको लागि त्यो सबैभन्दा मनपर्ने खाना बन्नसक्छ ।यहाँ बालबालिकालाई शान्तिपूर्वक सम्झाउने केही तरिकाहरु उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्तो विकल्प जतिबेला पनि प्रयोग गर्नु राम्रो हुँदैन । सम्झाउने अरु कुनै विकल्प नभए मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– बालबालिकाले तरकारी खानमा खासै रुचि देखाउँदैन भने तपाईं त्यो दिन आफ्नो प्लेटमा तरकारी राख्नु र उसको प्लेट खाली राखिदिनुहोस् । जब उसले तपाईंसँग तरकारी माग्छ, उसलाई दिन नखोजेको जस्तो देखाउनुहोस् र थोरै मात्र दिनसक्छु भन्नुहोस् । यसले बच्चामा उक्त तरकारी खाने इच्छा बढ्छ र तरकारी खानमा रुचि राख्न सक्छन् ।
– बच्चाले यदि कुनै काम बिगार्‍यो भने उसलाई सजायको रुपमा उसलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा गर्नबाट रोक लगाउनुहोस् । उदाहरणको लागि बच्चाले कुनै गल्ती गरेको छ भने उसलाई सबैभन्दा मन पर्ने खाना खान नदिनुहोस् । यसले उसको खानाप्रतिको रुचिले पनि उसले अनुशासनमा बस्ने प्रयास गर्छ ।
– कहिलेकाहीँ बच्चाहरुलाई खाना खुवाउने विषय निकै कठिन बन्न पुग्छ । यस्तोमा उनीहरुलाई सबैभन्दा मन पर्ने एउटा खाना तयार पार्नुहोस् र अन्य सबै खाना खाएपछि मात्र उसलाई त्यो खानेकुरा खान दिनुहोस् । यसो गर्दा उनीहरुले मनपर्ने खानाको आशामा अन्य खाना पनि सजिलै खान्छन् ।
– कहिलेकाहीँ बच्चाहरुलाई आफ्नो निगरानीमा उनीहरुले सधैं जिद्दी गर्ने काम गर्न पूर्णरुपमा छूट दिनुहोस् । यसो गर्दा उनीहरुले नराम्रो जिद्दीको विषयमा उनीहरुलाई ज्ञान हुन्छ र उनीहरुले फेरि यस्तो जिद्दी गर्दैनन् ।
– बच्चाहरुलाई कुनै काम लगाउनुपर्‍यो भने उनीहरुसँग उक्त काम सकाउने प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् । त्यसमा उनीहरुलाई जित्न पनि दिनुभयो भने उनीहरु त्यो कामका लागि उत्साहित हुन्छन् र अघिपछि पनि त्यो काम गर्न अघि सर्छन् ।
– बच्चालाई उसले खेल्दै गरेको खेलौनाबाट टाढा राख्ने प्रयास गर्ने हो भने ऊ त्यसै पनि रिसाउँछ र खेलौना छाड्दैन । तर, तपाईं उसलाई खेलौना कति छिटो मिलाएर राख्न सक्छौ हेरौं भनेर यसलाई अर्को तरिकाले भन्नुहोस् । यसको केही समयमा सजिलै उसले आफ्नो खेलौना मिलाएर सधैं राख्ने गरेको स्थानमा राख्छ र त्यसपछि उसको ध्यान अन्यत्र मोड्नुहोस् ।
– बच्चालाई कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्न लगाउनुभयो भने उसले नपढ्न पनि सक्छ । तर, तपाईंले उनीहरुलाई अर्को व्यक्तिसँग तुलना गरेर उक्त विषयको पढाइमा ऊ राम्रो रहेको भनेर प्रशंसा गर्नुहोस् । यसबाट प्रेरित भएर उसले उक्त पढाईमा ध्यान दिन थाल्छ ।
– बच्चाहरुलाई कहिलेकाहीँ कुनै काम अह्राउँदा उनीहरु मान्न तयार हुँदैनन् । त्यही कुरालाई तपाईंले मलाई थाहा छैन तिमीले यो काम गर्न सक्दैनौ भनेर चुनौती दिनुभयो भने सोचेभन्दा सजिलै उनीहरुले सो काम गर्छन् ।
– साना बच्चाहरुलाई कहिलेकाहीँ बाहिर हिँड्दा सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ । उनीहरु अभिभावकको हात समाउन मान्दैनन् । यस्तोमा उनीहरुले हात नसमाते आफूलाई अरु कसैले चोरेर लैजान्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहोस् । यसले उनीहरु तपाईंको हात समातेर हिँड्न सुरु गर्छन्।
– बच्चालाई कुनै काम गर्न लगाउनुभन्दा पनि पहिला उनीहरुलाई दुई विकल्प दिनुहोस्, जसमा आफूले चाहेको काम तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ भन्ने बच्चालाई थाहा होस् । यस्तोमा उनीहरुले एउटा विकल्प छान्दा आफूले चाहेको काम छान्छन् ।अनलाईनखवर वाट
अमेरिकाको टेक्सासमा मृत्युदण्ड
सुपाखोलामा जिप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्युु, पाचँ…
‘ग्रिनल्याण्ड’ किन्ने कुरा नमिले पछि अमेरिकी राष्ट्रपति…
धेरैपछि धुर्मुसलाई भेट्दा
पार्टी प्यालेसमा तिज मनाउन दिन काँग्रेस सांसदको…
कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा श्रमदानमा ब्यस्त
आज शनिबारको राशिफल
लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन दाङ देउखुरीमा राख्ने तयारी
डा बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण
क्लिन फिड लागू
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक संक्रमित पुरुषको मृत्यु
नेपाल स्पेन समाज कोष्टाब्लान्काद्धारा ढोरपाटनका बाढी पहिरो पिडितलाई राहत सामग्री…
वालिङको बातावारण सुहाउदो उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरौं, दीगो आर्थिक बिकास सम्भव…
टिभिएस दसैंको आशा योजना अन्तर्गत मदन पोख्रेल खत्रीले जिते अपाचे…
पत्रकार भुवन केसी अर्थमन्त्री पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त